Alshabaab oo baaritaano Baraawe ka wada iyo Mareykanka oo shaki ka muujiyey in sirta weerarkii Baraawe ay ka baxday dhinaca dowlada Federaalka – idalenews.com
Xoogaga Al Shabaab ee gacanta ku haya magaalada Barawe ayaa wada baaritaano xoogleh oo ay ku wadaan shaqsiyaad ay sheegeen inay la shaqeeyaan sirdoonka Reer Galbeedka, kuwaasi oo la rumeysan yahay inay ku sugan yihiin gudaha magaalada Barawe.
Maalimihii lasoo dhaafay ayaa waxaa xirnaa wadooyinka magaalada Soogala, waxaa sidoo kale shacabka loo diiday inay booqdaan goobaha isbitaalada ah ee dagaalyahanada Al Shabaab ku sugan yihiin.
Arooryadii hore Sabtdii lasoo dhaafay ayey ahayd xiligii ay ciidamada Maraykanka ay weerar ku qaadeen guri ku yaal xeebta magaalada Barawe, halkaasi oo ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan Al Shabaab.
Sida laga soo xiganayo illo ku dhaw dhaw sirdoonka Maraykanka ayaa sheegaya in hawlgalkaasi Maraykanka ku doonayey inay kusoo qabtaan nin lagu magacaabo Cikrama oo la sheegay inuu ka yimid dalka Norway, isla markaana Al Shabaab u qaabilsan yahay dhanka dajinta weerarada.
Ninkan ayaa lala xariirinayaa inuu ku lug lahaa weerarkii ay Al Shabaab ku qaaday xarunta ganacsiga ee Westgate ee magaalada Nairobi 21kii bishii lasoo dhaafay ee September, weerarkaasi oo ay ku dhinteen 67 qof.
Waxaa la rumeysan yahay in xubnaha la baadi-goobayey ay xiriir toos ah khadka talefoonka la sameeyeen kooxdii fulisay weerarkii Westgate taasina keentay inay u sahasho Maraykanka inay ogaadaan goobtii uu ku sugnayeen dadkaasi sida weyn loo baadi goobayo, sida ay sheegayaan qaar kamid ah saxaafada Maraykanka.
Al Shabaab ayaa dhankooda sheegay in guriga weerarka ay ku qaadeen Maraykanka ay ku sugnaayeen dagaalyahano caadi ah, oo aysan wax mas’uuliyiin ka tirsan Al Shabaab aysan halkaasi joogin.
Dhinaca kale waxaa iyaduna jira shaki ay reer Galbeedka ka muujinayaan in sirta weerarkaasi ay ka baxday dhinaca dowlada Federaalka, oo la sheegay in horey loola sii socodsiiyey in weerarkaasi Maraykanka ku qaadi doono magaalada Barawe, walow aysan dowlada Soomaaliya arrimahaasi ka hadlin.
Al Shabaab ayaa sheegtay inay khasaaro xoogan u geysteen kooxdii ciidamada Sealska ee Komaandooska Maraykanka ee soo weeraray, kuwaasi oo lagu khasbay inay dib uga gurtaan goobta iyagoo dib ugu noqday doonyo yar yar oo ay wateen.
Al Shabaab ayaa internetka kusoo bandhigtay qalab kala gedisan oo ay ku jiraan bambaanoyinka gacanta laga tuuro, rasaas iyo qalabka wax haga, qalabkan ayey xaqiijiyeen khubaro reer Maraykanka ah inay yihiin qalabka ay isticmaalaan ciidamada Maraykanka.
Hase yeeshee dowlada Maraykanka ayaa sheegtay in ciidamadooda wax khasaaro ah dagaalka kasoo gaarin, isla markaana ay dib usoo gurteen kadib markii ay ka baqeen in dagaalka dhexmaray ciidamadooda iyo Al Shabaab ay khasaaro kasoo gaarto dadka shacabka ah, waa sida ay hadalka u dhigeenee.
Maraykanka ayaa warar badan kasoo saarin hawlgaladooda fashila, waxaa horey u jiray weerar noocaan ah oo ay ku fashileen ciidamada sirdoonka Faransiiska oo weerar ku qaaday tuulada Buulo Mareer bishii janaayo ee sanadkan.